PressReader - Ilanga: 2018-11-22 - Uzothathela amabhokisa izinyathelo
Uzothathela amabhokisa izinyathelo
UMagudulela uthi okubuhlungu wukuthi bonke "abangcolisa igama lakhe", baphuma esandleni sakhe
Ilanga - 2018-11-22 - Izindaba - PHUMLANI GAMA
SIKHALA ngomkhankaso esithi kuhloswe ngawo ukudicilela phansi igama laso nenkampani yaso, iLudonga Boxing Promotion, isikhulu sesibhakela, uMnu Thulani “Nkunzi” Magudulela, njengoba sekuvele elinye ibhokisa elithi liyosikhohlwa lifile.
NgoLwesine olwedlule ILANGA libike ngebhokisa lasoNdini, uXolani “Steady” Mvubu elithe livulele uMnu Magudulela odabuka KwaNongoma, icala lenkohlakalo - okumanje udaba lusemaphoyiseni, oKlebe nabameli.
UMvubu uthe uMnu Magudulela onesikhungo samabhokisa eThekwini, ufune uxhaso luka-R476 000, 00 ngegama lakhe kuMasipala waseZululand ngo-2016, ethi uzohlela izimpi zamankomane ukuphakamisa yena.
Uveze ukuthi kwalezo zimpi zigcine zingabanga khona, emuva kwalokho uMnu Magudulela umtshele ukuthi kunezimpi eziseMtubatuba azomfaka kuzona, wamnika o-R20 000 ababili no-R500 wokugibela, okuyimali athe akakayithinti kuze kube manje.
Sekuvele uScelo Mzobe waKwaMaphumulo, kodwa osezinze eThekwini ngezimo zempilo, othe akafisi lutho olumhlanganisa noMnu Magudulela ngenxa yezimo ezinzima asemdlulise kuzona.
Uveze ukuthi lesi sikhulu samphoqa ukuba ayocela imali yokuhlelwa komdlalo kuMnu Jacob Zuma obengume-ngameli waseNingizimu Afrika ngoba enguninalume (kaMnu Mzobe).
“Ngakhuluma nomalume wangeluleka ukuba ngikuqaphele lokho ngoba kuyinkohlakalo ephindaphindiwe ukuba kusuke mina ngiyocela imali yokuxhasa umdlalo engingeke ngibe yingxenye yawo, kodwa okuzothi uma isikhishwa yenganyelwe ngusomabhizinisi (Magudulela).
"Ngokwenqaba ukwenza lokho, ngaqala ukuba yiqaqa kubaba uMagudulela. Ngolunye usuku wasihlalisa ejimini endaweni yakhe kwaze kwasa ekuseni eshaye utshani. Sase sivele siyisayinile imali esasizoyidlalela ngalolo suku. Bakhokhelwa bonke enganginabo, mina kanginikwanga u-R10 000, 00 engangiqashwe ngawo ngoba sengiphumele obala ngokungagculiseki kwami.
"Ngahlukumezeka kusuka lapho ngoba ubaba uMagudulela wangitshela kwezikabhoqo ukuthi akukho lapho ngizophinde ngidlale khona. Ngizojima kuze kuqothuke ikhanda ngingangeni eringini,” kusho uMzobe. Ethintwa uMnu Magudulela, uthe impela uyamazi uMzobe.
Uthe inkinga iqale ngesikhathi uMzobe ekhombisa ubugwala ngokwesaba omunye umfana abeqhathwe naye kwenye yezimpi okwakufanele ibe seThekwini.
Uthe okunye okumphambanisa naye wukuthi uhamba etshela abantu ukuthi wamlalisa ejimini kwaze kwasa, kanti phela uyaziwa umthetho wokuthi kabaxhaswa ngezindawo zokulala abantu abahlala ebangeni elingaphansi kuka-100 km ukusuka lapho kukhona izimpi.
“UMzobe ngomunye wabafana abakhulele phambi kwami.
"Ngimazi kakhulu, kodwa kangikuthandi akukhuluma ngegama lami, ehamba engibeka kabi kubantu. Mina naye sihlala eMlazi, lokho kusho ukuthi kwakufanele ukuba sibuyele emakhaya ngoba singabendawo sonke.
"Uhamba ethi ngiyamzonda. Umbuzo uthi uma kunjalo, yini eyabangela ukuba ngimnike imvume yokusebenzisa indawo yami eThekwini njengoba naye eseqale ukuphromotha abafana?
"Engikwaziyo futhi enginobufakazi ngakho, wukuthi yena nabanye obhululu bakhe, baphume umkhankaso wokungcolisa igama lami nenkampani yami.
"Lokhu ngikusho ngoba nginawo nama-SMS achazayo ukuthi ngobani abangidlela umona ngomsebenzi wami. Kwalona udaba lukaXolani kalungethusi ngoba mina ngisamthatha njengomfana wami okusafanele ngisebenze naye ngoba ukhulele phambi kwami.
"Ngizophoqeleka ukuba ngithathe izinyathelo zomthetho, kodwa ngisazothulisa kancane ngokwelulekwa ngomunye wabameli bami ongitshele ukuthi angizivalele umlomo.
"Bonke laba bantu abangigconayo, baphuma esandleni sami, kodwa ekugcineni bangikhuluma kabi. Kukho konke lokhu engikwenziwa yilaba bantu, ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzongilwela, angiphendulele ngoba kayikho into ebuhlungu njengokuba kuhlangane abantu ngenhloso yokuqeda ngegama lakho emphakathini,” kusho uMnu Magudulela.
U-Adv Bonga Khumalo, ongomunye wabameli abaphethe udaba lukaXolani, uthe maduze nje, bazofaka amaphepha kuMasipala waseZululand baphoqe ukuba kuthathwe izinyathelo.
IMeya yaseZululand, uMfu Thulasizwe Buthelezi, ithe akukho abasakutholile okubikwe kubona ngalolu daba, kodwa yanxusa uMvubu ukuba athumele isikhalo sakhe kulo masipala ukuze kwenziwe uphenyo.
Emuva kwalokho luzolandelwa, kuthathwe izinyathelo ezinqala kwabathintekayo.
Uthe wudaba olubucayi lolu, ngakho ludinga ukuba lusukunyelwe ngokucophelela. Wengeze ngokuthi umasipala wakhe kawuhambisani nezenzo zenkohlakalo.
USCELO Mzobe othi akamfisi uMnu Thulani Magudulela, weLudonga Boxing Promotions, kodwa lesi sikhulu sona sikhala ngomkhankaso wokusidicilela phansi.